Edaphology: ihe ọ bụ, njirimara na akụrụngwa nke ala | Netwọk Mgbasa Ozi
Nkà mmụta sayensị ala bụ sayensị dị obere nke ebumnuche ya bụ ịmụ ala. Ọ na-apụta na ngwụsị narị afọ gara aga, ọ na-amụkwa ala site na echiche niile. Mụọ morphology, mejupụtara, Njirimara, guzobere, nkesa, taxonomy, ịba uru, mgbake na nchekwa. Ọ bụ ngalaba a na-amụkwa na sayensị gburugburu ebe ọ nwere nnukwu ngwa na gburugburu ebe obibi.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị njirimara niile, mpaghara ọmụmụ na echiche nke edaphology.
2 Akụkụ nke edaphology
2.1 Edaphic horizons
2.2 Agba na udidi na sayensị ala
2.3 Porosity, àgwà na ọrụ mmadụ
Na edaphology enwere echiche nke ala na ala nke na adighi eduhie. Otú ọ dị, a na-ewere ala dị ka elu nke mbara ala siri ike nke ụwa. A na-etolite oyi akwa a site na ihu igwe nke nkume nwere ike gbanye mkpọrọgwụ. Ala bụ ebe obibi gburugburu ebe obibi maka ụdị ụfọdụ nke ndị dị ndụ na ekele maka nke a, ha nwere ike ịzụlite ma mụta nwa. A pụkwara ikwu na ebumnuche nke ala dị ka ngwakọta nke obere iberibe okwute na ihe ndị sitere n'okike na-agwakọta nke ọma, yana mmiri mmiri na gas dị n'ọtụtụ dịgasị, na-ezute ụfọdụ ikike na-arụpụta.
Ekwesiri iburu n'uche na edaphology dị mkpa maka ọtụtụ alaka. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-amụ uru nke ala maka ọrụ ugbo, ọ dị mkpa ịmara ihe niile mejupụtara ya na ikike ọ na-arụpụta. Mgbe a na-amụkarị ihe ndị ahụ, a ghaghị iburu akụkụ ụfọdụ dị mkpa n'uche. N'otu aka, njirimara nke ebe ebe ọ dị na njirimara akọwapụtara nke ala. N'ime njirimara ndị a, anyị nwere ihe ndị mejupụtara, morphology na akụrụngwa.
Mgbe anyị na-enyocha njirimara nke ebe ahụ iji mepụta ọmụmụ ihe na sayensị ala, anyị ga-eburu n'uche akụkụ ndị bụ isi. Ndị a bụ ndị a:
Raindị ọdịdị ala: kwekọrọ na ihe enyemaka nke enyemaka e guzobere ala.
Mkpọda: mkpọda bụ ogo ebumnuche nke enyemaka. Ekwesịrị ikpebi mkpọda dị ka o kwere mee. A na-akpọkarị ya etiti mkpọda ebe ha bụ ala.
Akwukwo nri: A na-amuta ezi ihe ahihia nke enyere n'ala iji hu udiri ugbo, ma obu ihe eji eme ya ma obu nke okike. Mgbe anyị na-ezo aka na wuru, anyị na-ezo aka na osisi ndị mmadụ toro.
Ihu igwe: a na-enweta ihu igwe site na data nke ụlọ ọrụ meteorological. Dabere na ihu igwe nke otu mpaghara, njirimara nke ala ya na-adịkarị iche.
Akụkụ nke edaphology
Anyị ga-ahụ ihe bụ isi akụkụ nke edaphology nke metụtara njirimara nke ala. Nke mbụ n’ime ihe niile a ga-amụ n’ime ala bụ morphology ya. Site na morphology, horizons, agba, udidi, porosity, àgwà nke ndu, ọrụ mmadụ na usoro a na-amụ. Akụkụ ndị a niile dị mkpa iji nyochaa ala n'ozuzu ya. Anyị ga-ahụ ihe isi ihe ndị a niile bụ na ihe ha gbasara.
Oke ugwu na-ezo aka na morphological di iche iche nke ala iji guzobe usoro nlebara anya siri ike. Ejiri mkpụrụedemede ukwu egosi ụdị mkpụrụ ndụ ihe nketa. A na-eji ụfọdụ akwụkwọ ozi eme ihe maka mbara igwe, ndị ọzọ maka mbara igwe na ndị ọzọ iji hụ nke bụ ọkwa nke ihe mbụ na-agbanwe ma ọ bụ gbanwee. Fọdụ n’ime mkpụrụedemede ndị ahụ nwere ike isoro ndị ọzọ kọwaa njirimara dị mkpa nke esoghi na nkọwapụta mkpụrụedemede kwekọrọ na ya. Nke a na-abụkarị ọnụ ọgụgụ.
Ihe omimi bu ndi di n'etiti ederede abuo. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ na ndị bi na ya nwere ngwakọta ngwakọta na ọ na-esiri ike ịhọrọ otu n'ime ha. Mixed horizons bụ ndị dị n'etiti isi na abụọ na-interpenet n'ụzọ nke na ha mejupụtara a zuru ezu ngwakọta. Ọ dị iche na nke ọzọ mgbanwe n'etiti abụọ Njirimara na-kpam kpam agwakọta.
Agba na udidi na sayensị ala
Agba nke ala dị na-agbanwe oke mana ọ dịkwa ezigbo mkpa. Ihe matriks nke horizons na ọnụnọ nke ntụpọ dị iche iche mgbe ị na-achọpụta ụdị ala. Mkpụrụ vaịn niile dị mkpa nke mejupụtara mpempe ụrọ dị ọcha na agba. Otú ọ dị, ọ bụghị agba a na-enwekarị nke ụrọ ahụ a sụtara n’ala nwere. Agba abụghị n'onwe ya ihe dị egwu, mana ọ na-enye anyị ọtụtụ njirimara banyere nhazi ala na omume ya.
Banyere udidi ahụ, ọ bụ banyere ụzọ e si kesasị ihe ala ahụ nha. A ghaghị ime mkpebi ya site na nyocha kwekọrọ. Otú ọ dị, n'ọhịa ị nwere ike n'ụzọ na-enweghị isi na-ahụ ụfọdụ obere bọọlụ n'etiti mkpịsị aka ịmata ụdị mkpakọrịta na-abịa. Site na ahụmịhe ụfọdụ, enwere ike ịkọwapụta ụdị ala ederede dị iche iche.
Porosity, àgwà na ọrụ mmadụ
A ghaghị ime mkpebi nke porosity site na usoro na-enweghị isi yana izugbe. Njikọ dị n'etiti ụdị abụọ a na-enyere aka ịchọpụta njupụta na njigide mmiri nke ala. Ike njigide mmiri dị mkpa ma ọ bụrụ na a ga-eji ala maka ịkọ ma ọ bụ ọrụ ugbo. Ha niile nwere ike ịgwa anyị gbasara ụtaba siga dị na ala. Ọ naghị enye anyị ụzọ esi kesaa pores n’ala niile ma ọ bụ ọdịdị ha ma ọ bụ nghazi ha. Otú ọ dị, ọ bụ ozi na-ekpebi akụkụ ụfọdụ nke ala.
Akụkụ ọzọ pụtara ìhè bụ mbibi metụtara n'etiti mbara ala dị iche iche. N'ọtụtụ oge ọ na-ezukarị iji kọwaa omume ya. Mgbe anyị na-ezo aka na njirimara sitere n'ọmụmụ, anyị na-akọwa ọnụnọ anụmanụ ma ọ bụ ihe akaebe nke ya n'oge ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnwe site na metamorphoses, veranda, akwụ, wdg. Yak mmọ ẹdi edu mme unam. Ọrụ ụmụ mmadụ dịkwa mkpa iji tụlee na ala a ga-eji ya. Ọnụnọ nke iberibe iberibe Lozada, mkpọmkpọ ebe, ihe akaebe nke mkpofu ma ọ bụ ihe ọ bụla na-abụghị nke ala na enwere ihe akaebe nke mmechi mmadụ dị mkpa iji nyochaa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere edaphology na otu esi amụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe omumu